Ebe Germany Njem ezumike | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Nature na ala na Germany
Obodo Federal Republic nke Germany aghọwo ọgaranya dịka njem nleta maka ọtụtụ afọ. Nke a bụ tumadi n'ihi ọmarịcha ohere njem na saịtị na ọtụtụ nlegharị anya. Ma ndị ezumike, omenala ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ọdịdị nke ụwa, onye ọ bụla na-enweta ego ha bara na mba a.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ihe ngosi nka dị elu, ụlọ oriri ndị magburu onwe ya na ọtụtụ ohere ịme ememe, gaa n'otu n'ime obodo ukwu anọ kachasị: Berlin, Hamburg, Munich na Cologne. O doro anya na Berlin bụ obodo ukwu nke mba ahụ na ihe ijuanya ọbụna ndị nleta na-aga eleta ugboro ugboro na ọnọdụ ikuku ha.
Hamburg, nke a maara aha ya bụ Speicherstadt, na-enye ọmarịcha ọkụ, mgbe Munich, obi Bavaria, na-akpọ gị òkù ịga njem na mpaghara gbara ya gburugburu. Cologne n'aka ya na-eleta enyi ya Rhineland na Cologne Katidral, nke kachasị eleta ụlọ na mba ahụ.
Na Germany ị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ puku afọ gara aga na-adabere n'ọtụtụ akwụkwọ mgbapụta. N'ebe ọ bụla e nwere ihe ndị Rom, dị ka baths na ọdọ mmiri. Karịsịa maara nke ọma ebe a bụ ihe atụ Trier na Xanten.
Ọzọkwa, mba ahụ na-enye ọtụtụ chọọchị dị iche iche dị iche iche. Karịsịa, Frauenkirche na Dresden na Aachener Dom amawo ọkwa mba ụwa. Site na nnukwu nkume dome ha ma ọ bụ ụlọ Renaissance, ha na-anọchite anya ihe ngosi pụrụ iche nke owuwu ụlọ.
Oge emepechabeghị anya na-egosipụtakwa nke ọma: Germany ama ama maka nnukwu ụlọ na nnukwu ụlọ ya, bụ ndị mweghachi na-enweta ma na-enweta ọtụtụ nlebara anya. Ndị a bụ karịsịa ụlọ ndị dị n'akụkụ Rhine na Moselle ịkpọ.
Ubi vaịn na ụzọ njem na-asọba n'akụkụ osimiri abụọ ahụ so n'ime ndị kasị nwee ịhụnanya na mba ahụ, na-ejikọta mfe ịnweta ohere dị mfe. N'aka nke ọzọ, Castle Neuschwanstein, nke na-acha ọcha ma mara mma n'ugwu ọhịa dị na Bavaria dị n'ebe ndịda, dị ka akụkọ ọhụrụ.
Ma ọbụna ndị njem na-achọ ihe ndị dị mma na-eme, echela na Germany ihe efu. E nwere ngụkọta nke Parks National Park, nke ụlọ dị iche iche na gburugburu ebe obibi.
Atọ n'ime ha na-ekpuchi Wattenmehr nke ụwa a dị na ugwu nke mba ahụ, ebe a pụrụ ime njem nleta na-eduzi.
Maka ndị na-eto eto na ugwu ugwu, Eifel National Park, ebe a na-ahụ ihe ndị a na-eme mgbawa, na Saxon Switzerland na usoro Elbe sandstone dị mma. N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọtụtụ ogige ntụrụndụ mba na-agụnye oke ọhịa mara mma ma mara oke, dịka ọmụmaatụ na Harz, Black Forest ma ọ bụ Hunsrück.
Chọgharịa ụdị anyị Ịme ihe nkiri dị na Germany.
Ala ahụ zuru oke maka ndị ọkachamara na ndị na-amateur. Nke a abụghị naanị n'ihi ihu igwe dị mma, kamakwa ọtụtụ ebumnobi dị iche iche a pụrụ ịchọta.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ ga-ekwe omume ị nweta akụkụ ahụ na ngwa ngwa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile, yana enwere ike ịmepụta foto na saịtị n'ime obere oge ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Njem Canada Canada - Na-ejegharị na West Canada
Bundeskanlzer na Federal President nke ...